Strimingovy Apple Umculo umculo inkonzo wethulwa 2015. Yithole kunoma yisiphi "apula" kumadivayisi, amakhompyutha esebenzisa i-Windows futhi kumadivayisi eselula egijima on Android OS. Izinyanga ezintathu zokuqala isevisi itholakala mahhala. Ngesikhathi okuphela ngalo ukubhaliswa kwesilingo, umsebenzisi kumelwe sikhethe ukuthuthela ekhokhelwayo noma iqede ukusebenzisa isevisi. Kulesi sihloko sizokubonisa indlela ohlweni Apple Zomculo nganoma isiphi isikhathi futhi kunoma iyiphi idivayisi.
Ukuze uqonde kangcono ukuthi yini ukuthi sisebenzelana nabantu, ake sibukeze kafushane amathuba anikezwa inkonzo strimingovym "inkampani apula". Ukuze uqale ukuyisebenzisa, kufanele ube Apple ID kubhaliswe, isihlonzi esehlukile, okuvumela ukusetshenziswa wonke amasevisi we nkampani. Ngokubhalisa, umsebenzisi uthola ukufinyelela okugcwele service kusukela osukwini lokuqala, azikho imikhawulo ukukhetha kanye nokusetshenziswa umculo singanikezwanga.
Banikezwe sesivivinyo, ungakwazi ukukhuluma izinhlobo ezinhlanu okubhaliselwe:
Mahhala. Itholakala kuphela kubasebenzisi abasha isevisi izinyanga ezintathu.
Ngamunye. Iqoqo lakho siqu umculo, izindleko - ngenyanga 169₽.
Ngamunye ngonyaka, izindleko - 1690₽.
Umkhaya. Finyelela iqoqo lomculo wakho abantu abayisithupha, izindleko - ngenyanga 269₽. Ukuze bonke abahlanganyeli kufanele pre-ihlelwe "Finyelela Umndeni" ikuvumela ukudlulisa okuqukethwe ezithengiwe.
Student. iqoqo Siqu ngentengo ehlisiwe abafundi emakolishi noma nezikhungo. Ukuhlola isikhathi kuze kube iminyaka emine, ngesikhathi intengo yokubhalisa nyanga zonke 75₽.
Mangisho ukuthi past selokhu kuqale isikhathi inkonzo Intengo yokubhalisa abantu Russian azishintshiwe. Ngesikhathi esifanayo, amanye amazwe e-2017 waba ophucwa sesivivinyo samahhala, okuyinto esikhundleni umusa namakhefu akhokhelwayo encishisiwe.
Manje njengoba zonke izinketho itholakale futhi izindleko zabo yaziwa, ake sibheke indlela ukukhubaza Apple Umculo. Cabanga ukulandelana yezenzo zonke yamadivayisi lapho le sevisi itholakala.
iPhone noma iPad
zamaselula ziphawulwe logo ye-apula, osakazwa kakhulu kunabo bonke. Ngakho-ke, ukuze siqale siyowuqonda indlela ohlweni Apple Umculo oku-iOS 9 noma 10. Ukufinyelela kusevisi wenziwa kusukela uhlelo "Umculo" futhi ukukhubaza futhi usebenzise efanayo lwalezi nhlelo zokusebenzisa:
Khetha "Ngoba wena, 'wakhetha inhliziyo logo.
Ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini izovela uphawu iphrofayli, ukuyivula, yiya engxenyeni ethi "Buka Apple ID».
Kuskrolelwa iphuzu "Okubhaliselwe" futhi ukuyivula.
Ngemva uhlu lokukhethwa kukho kuyatholakala ukusetshenziswa i inkinobho interactive "Zikhiphe ohlwini".
Ngemva ivimbele inkonzo imisebenzi kudivayisi yakho kuyoba kuze kube sekupheleni kwesikhathi esikhokhelwa, okuyinto abalwa kusukela ngosuku ikhomishana okubhaliselwe ngenyanga. Ngendlela efanayo, ungase ohlweni Apple Umculo free subscription. Uma wenza lokhu, ukufinyelela ezikhethiwe ngesikhathi kuthethwa icala lakhe, izingoma uzovimbelwa. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukufinyelela khulula kunikezwa kanye kuphela futhi akuyona izingxenye izinkathi. Uma amandla ngosuku olulodwa bese kucishwa, okubhaliselwe Isivivinyo kuyothathwa asetjenziswe.
Mac yakho noma i-Windows
Kumakhompyutha ukusebenza inkonzo strimingovym usebenzisa iTunes. Cabanga indlela ohlweni kusukela subscription Apple Umculo nalo. Nalapha futhi, isigaba evulekile "Ngoba wena," futhi ngaphansi isithonjana iphrofayela, ukhethe into "I-akhawunti Ulwazi". Ngemva kokuqinisekisa iphasiwedi kuzovula Apple idatha ID. Ukudamba kubo esigabeni lokugcina "Izilungiselelo" futhi sikubheka njengempahla nto "Okubhaliselwe". Ukucindezela "Phatha" ukuvula zonke izinketho etholakalayo ngokusebenzisa isevisi, okubandakanya ukuqedwa wokubhaliswa.
izenzo Okufanayo kungenziwa kusuka iTunes imenyu "Accounts." Ngokukhetha "Buka", nani uyophinde kabusha idatha yomsebenzisi Apple ID. Indlela ukukhubaza ukubhaliswa ku-Apple Umculo naleli khasi, siye echazwe nje.
Apple TV set-top box ezizukulwane ezine - kuphela ochungechungeni lezi zobuchwepheshe, uyakwazi ukusebenza inkampani service strimingovym. Ukusebenzisa it, ungakwazi futhi ukwenza ukubhaliswa ku-Apple Umculo. Indlela ukwenza lokhu, sicabanga manje.
Udinga ukufaka imenyu set-top izilungiselelo ibhokisi futhi i-akhawunti yakho, ukuqinisekisa kwesango layo nge iphasiwedi. Emva kokuphothula lezi manipulations, uzobona ajwayelekile control imenyu lapho ungakwazi ukuvimbela ukubhaliswa ku-Apple Umculo. Njengoba ubona, lutho nzima kuleli, isenzo kuwo wonke amadivaysi ngenhla basuke kucishe.
Ukuvula kungenzeka ukusebenzisa izinkonzo zalo umculo ku-Android-kumadivayisi, guys kusukela Lake benzé uhlakaniphile amacebo okuthengisa ongawacabanga. Abanye abasebenzisi yaleli yesistimu yokusebenza, kungase kube akwazi ukuze ushintshe izintandokazi zabo bese ujoyina ibutho abalandeli "apula" imikhiqizo. Kulabo abangamazi kuthakazelisa zama uhlelo lokusebenza kwegama elifanayo, kungenzeka ukukhubaza Apple Umculo. Indlela yokukwenza Android, sizobe sitshele.
Faka imenyu ekhasini eyinhloko isicelo ukuya izilungiselelo ze-akhawunti yakho. Lapha udinga ukuthola ithuba ukuthenga ukuphathwa nabakhubazekile ukuvuselelwa othomathikhi. Ngemva ekhiqizwa isinyathelo inkonzo Kuzoze kube kokuphela kwenyanga eyodwa, owawuke ukuyikhokhela.
Zonke izindlela ekhonjwe ngenhla zibonisa indlela ohlweni Apple Umculo amadivayisi ahlukahlukene electronic. Kuyaqondakala ukuthi, walahla ukusetshenziswa isevisi, ngeke babuyele kuye futhi okungangako. Uma abasebenzisi Android ngeke nje kube izindlela kuyatholakala kweminye abanikezeli bemikhiqizo zomculo, Mac futhi abasebenzisi Windows, ngaphezu, ungakwazi ukhetha okunye okukhethwa kukho ohlelweni i-Apple.
Sikhuluma iTunes Match, omunye "apula" imikhiqizo ezihlobene umculo. isicelo sayo ikuvumela ukuba ulandele iseluleko sendlela ohlweni Apple Umculo, uqhubeke ukusebenzisa iCloud njengoba iseva ukugcina iqoqo lomculo wakho. Isici esivelele sesimiso wakhe ukuvumelanisa akhona kukhompyutha yakho umtapo iTunes Store.
Okufakiwe ezifanayo egcinwe esitolo umculo, sizobuyiselwange nabo izinga elifanele. Izikhungo ilinganiselwe siqu ubukhulu kanye nenani iculo agcinwe, kodwa nokho unikeza umsebenzisi inguqulo kuhle ukusetshenziswa ehlukile iqoqo lomculo wakho. Uma sigxila kakhulu ekuhlulekeni Apple Umculo ezihambisana kuphela izindleko, kuhle ukucabangela. Ekubhaliseni konyaka kuyokulahlekisela ngengxenye yentengo.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela ohlweni Apple Umculo futhi, kulandela izincomo zethu, uzokwazi ukwenza lo msebenzi kunoma iyiphi idivayisi olukwazi ezisebenza nge le sevisi strimingovym. Nokho, uma ngesikhathi sokugcina ushintsha umqondo wakho futhi unquma ushintshe okubhaliselwe kwakho ukwenze elula kakhudlwana inketho zamanani, ukuhamba komsebenzi kuyoba okufanayo.
Uhlelo efanelekayo uhlobo kwakho induku yokutakula. umkhankaso ekukwati kufundza nekubhala